Ebɛnadze nye Bible no?
KENKAN WƆ Abbey Abkhaz Abui Acholi Afrikaans Aja Akha Altai Alur America Mmum Kasa Amharic Angola Mmum Kasa Arabic Argentina Mmum Kasa Armenian Armenian (West) Ateso Attié Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Biak Bicol Bislama Bolivia Mmum Kasa Boulou Bété Cambodian Cebuano Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chiga Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chin (Zotung) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Mmum Kasa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombia Mmum Kasa Cuba Mmum Kasa Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Douala Drehu Dusun Dutch Edo Efik Emberá (Catío) English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Fijian Finland Mmum Kasa Finnish Fon French Futuna (East) Ga (Nkran Kasa) German Gitonga Gokana Greek Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guianese Creole Gun Guéré Haitian Creole Hausa Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Igbo Iloko India Mmum Kasa Indonesia Mmum Kasa Indonesian Irish Isoko Italian Italy Mmum Kasa Ivory Coast Mmum Kasa Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kisonge Kituba Kongo Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lamba Lambya Lari Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malay Malayalam Malaysia Mmum Kasa Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazahua Mbunda Mende Meru Mexico Mmum Kasa Mfantse Mizo Mongolian Moore Myanmar Myanmar Mmum Kasa Nahuatl (Central) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Nepali Nepali Mmum Kasa Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nsenga Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pidgin (Cameroon) Pidgin (West Africa) Poland Mmum Kasa Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Mmum Kasa Punjabi (Shahmukhi) Quebec Mmum Kasa Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rapa Nui Rarotongan Romania Mmum Kasa Romanian Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russian Rutoro Réunion Creole Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Mmum Kasa Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tatar Tetun Dili Thai Thailand Mmum Kasa Tigrinya Tiv Toba Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Vezo Vietnamese Vietnamese Mmum Kasa Wallisian Waray-Waray Welsh Wichi Wolaita Yacouba Zande Zulu
1, 2. Ebɛnadze ntsi na Bible no yɛ akyɛdze a ofi Nyankopɔn nkyɛn a ɔma hɛn enyi gye?
SƐ WO nyɛnko bi ma wo akyɛdze bi a ennhwɛ kwan a, ebɛyɛ w’adze dɛn? Ahoper na edze bobue do. W’enyi bɛgye dɛ wo nyɛnko no adwen wo ho, na ebɛda no ase wɔ akyɛdze no ho.
2 Bible no yɛ akyɛdze a ofi Nyankopɔn nkyɛn. Nsɛm a Bible no kã kyerɛ hɛn no yɛ dza yennkotum enya wɔ beebi fofor biara. Dɛ nhwɛdo no, ɔma yehu dɛ Nyankopɔn na ɔbɔɔ sor, asaase, nye ɔbarimba na ɔbaa a wodzi kan no. Bible no ma hɛn ngyinadonsɛm a obotum aboa hɛn ber a yɛakɔ ɔhaw ahorow mu no. Yebotum esũa mbrɛ Nyankopɔn bɛma no botae a ɔnye dɛ, ɔbɛma asaase no ayɛ bea a ahotɔ wɔ ho adze wɔ Bible no mu. Bible no yɛ akyɛdze a ɔma hɛn enyi gye ampa!
3. Ebɛnadze na ibohu ber a ekɔ do sũa Bible no?
3 Ber a ekɔ do sũa Bible no, ebɛba ebohu dɛ Nyankopɔn pɛ dɛ efa no nyɛnko. Mpɛn dodow a ekɔ do sũa no ho adze no, mpɛn dodow no ara na enye ne ntamu ebusuabɔ no mu bɛyɛ dzen.
4. Ebɛnadze na ɔma w’enyi gye mbrɛ woesi akyekyɛ Bible no ho?
4 Wɔakyerɛ Bible no ase akɔ kasa bɔbor 2,800 mu. Woetsintsim Bible no ɔpepepem pii. Wiadze yi mu nyimpa bɔbor ɔha mu nkyekyɛmu 90 na wobotum akenkan Bible no wɔ hɔn kasaa mu. Wɔ dapɛn biara no, nyimpa bɔbor ɔpepem kor na wonya Bible no bi! Ɔyɛ ampa dɛ, buukuu biara nnyi hɔ a ɔtse dɛ Bible no.
5. Ebɛnadze ntsi na yebotum akã dɛ, Bible no fi “Nyame ahom mu”?
5 Bible no fi Nyankopɔn anaa “Nyame ahom mu.” (Kenkan 2 Timothy 3:16.) Naaso, ibia nyimpa binom bosusu dɛ, ‘Nkyɛ nyimpa na wɔkyerɛɛw Bible no, ntsi ɔbɛyɛ dɛn na oeefi Nyankopɔn nkyɛn?’ Bible no yi ano dɛ: “Nyimpa fi Nyame mu kasaa dɛ mbrɛ Sunsum Krɔnkrɔn kãa hɔn.” (2 Peter 1:21) Yebotum dze iyi atoto edwumawura bi a ɔma ne kyerɛwfo kyerɛw krataa ho. Woana ne nsɛm na ɔkyerɛwfo no kyerɛwee? Ɔyɛ edwumawura no ne nsɛm, na nnyɛ ɔkyerɛwfo no ne dze bi a. Dɛm pɛpɛɛpɛr so na Nyankopɔn nye Bible no ne Kyerɛwfo na nnyɛ nyimpa a ɔmaa wɔkyerɛwee no. Nyankopɔn na ɔkyerɛɛ hɔn kwan ma wɔkyerɛɛw no nsusui. Bible no yɛ “Nyankopɔn asɛm” ampa.​—1 Thessalonicafo 2:13; hwɛ Nsɛm bi a Wɔakyerɛ Mu 2.
New World Translation of the Holy Scriptures no wɔ kasa pii mu
BIBLE NO MU NSƐM YƐ NOKWAR
6, 7. Ebɛnadze ntsi na yebotum akã dɛ Bible no mu nsɛm hyia?
6 Wɔdze mfe bɔbor 1,600 kyerɛɛw Bible no. Akyerɛwfo no anntsena ase wɔ ber kor mu. Nna binom nyim nwoma papaapa na binom so nnyim nwoma ahen biara. Dɛ nhwɛdo no, nna hɔn mu kor yɛ dɔkta. Nna binom so yɛ ekuafo, afarfo, nguanhwɛfo, nkɔnhyɛfo, atsɛmbuafo nye ahemfo. Ɔmmfa ho dɛ nna ɔsor akyerɛwfo no mu biara no, Bible no nnye noho mmbɔ ebira. Bible no nnkã asɛm bi wɔ tsir kor mu na ɔnnkã fofor a ɔnye asɛm no bɔ ebira wɔ tsir fofor mu. *
7 Bible mu nwoma a odzi kan no ma yehu mbrɛ ɔyɛɛ a adasamba haw hyɛɛ ase. Nwoma a odzi ewiei no ma yehu mbrɛ Nyankopɔn besi edzi ɔhaw no ho dwuma dze nam asaase a ɔbɛma ɔadan paradise no do. Bible no mu nsɛm ma yehu nyimpa n’abakɔsɛm bɛyɛ mfrenhyia mpempem pii a etwa mu no, na ɔma yehu dɛ, Nyankopɔn ne tsirmpɔw ba mu ber nyina.
8. Ma nhwɛdo ahorow a ɔkyerɛ dɛ, dza Bible no kã wɔ abɔdzenyansahu ho no yɛ nokwar.
8 Wɔannkyerɛɛw Bible no dɛ buukuu a wɔdze bɛkyerɛ abɔdzenyansahu anaa dɛ buukuu a wɔdze bɛkyerɛ adze wɔ skuul. Naaso, dza Bible no kã wɔ abɔdzenyansahu ho no yɛ nokwar ber nyina. Dɛm na yɛhwɛ kwan dɛ buukuu a ofi Nyankopɔn nkyɛn no bɛyɛ. Dɛ nhwɛdo no, Nyankopɔn maa Israelfo no mbra wɔ Leviticus nwoma no mu a ɔkyerɛ ɔkwan a wobotum afa do esiw yarba kwan ma ɔnntserɛw. Wɔdze dɛm mbra yi mae ber tsentsen ansaana nyimpa ruhu mbrɛ mbowaba a enyiwa nnhu hɔn dze yarba ba no. Bible no kyerɛkyerɛ nokwasɛm a ɔnye dɛ, asaase sɛn mbrɛ hwee nnyi. (Job 26:7) Wɔ ber a nna nyimpa dodow no ara gye dzi dɛ asaase yɛ tɛtɛr no, nna Bible akã dɛ ɔyɛ kɔntɔnkrɔn.​—Isaiah 40:22.
9. Ebɛnadze na nokwardzi a Bible akyerɛwfo no daa no edzi no ma yehu?
9 Sɛ Bible no kã abakɔsɛm ho asɛm a, ɔkã no pɛpɛɛpɛr. Naaso, abakɔsɛm nwoma ahorow pii wɔ hɔ a no mu nsɛm no bi nnyɛ nokwar, osiandɛ akyerɛwfo no nnyɛ anokwafo. Dɛ nhwɛdo no, sɛ hɔn man dzi ɔkogu wɔ ɔkõ mu a, nna wɔnntaa nnkyerɛw ho asɛm. Naaso, nna Bible akyerɛwfo no yɛ anokwafo na ber mpo a Israelman dzii ɔkogu wɔ ɔkõ mu no, wɔkãa ho asɛm. Bio so, wɔkyerɛɛw mfomdo ahorow a wodzii no ho asɛm. Dɛ nhwɛdo no, Moses kãa bɔn a enyiber wɔ mu a ɔyɛe a Nyankopɔn twee n’aso ho asɛm wɔ Nkanee nwoma no mu. (Nkanee 20:2-12) Nokwardzi a Bible akyerɛwfo no daa no edzi no ma yehu pefee dɛ, Bible no yɛ nwoma a ofi Nyankopɔn nkyɛn ampa. Iyi kyerɛ dɛ, yebotum enya Bible no mu ahotodo.
NWOMA A AFOTU PA AYƐ MU MÃ
10. Ebɛnadze ntsi na afotu a Bible no dze ma no do wɔ mfaso ma hɛn ndɛ?
10 Bible no fi “Nyame ahom mu na oye ma nkyerɛkyerɛ, nkaenyim, ntsẽa.” (2 Timothy 3:16) Ɔyɛ nokwar dɛ, afotu a Bible no dze ma no do wɔ mfaso ma hɛn ndɛ. Osiandɛ Jehovah na ɔbɔɔ hɛn ntsi, ɔtse hɛn nsusui nye hɛn nkãtse ase. Onyim hɛn yie sen mbrɛ hɛnankasa yenyim hɛnho na ɔpɛ dɛ hɛn enyi gye. Onyim dza oye ma hɛn a ɔsɛ dɛ yɛyɛ nye dza obepira hɛn a ɔnnsɛ dɛ yɛyɛ.
11, 12. (a) Ebɛn afotu a odzi mu na Jesus dze mae wɔ Matthew etsir 5 kesi 7 no? (b) Ebɛnadze bio na yebotum esũa wɔ Bible no mu?
11 Yebotum akenkan afotu a odzi mu a Jesus dze mae wɔ Matthew etsir 5 kesi 7 no. Jesus kyerɛɛ mbrɛ yebotum enya enyigye, mbrɛ yebotum nye afofor atsena, mbrɛ yɛmbɔ mpaa nye adwen a ɔsɛ dɛ yenya wɔ sika ho. Ɔmmfa ho dɛ, ɔdze afotu yi mae no mfrenhyia 2,000 etwa mu no, tum na mfaso wɔ do ndɛ tse dɛ mbrɛ nna ɔtse ber a ɔdze mae no ara.
12 Bio so, wɔ Bible no mu no, Jehovah kyerɛkyerɛ hɛn ngyinadonsɛm a ɔboa hɛn ma yenya ebusua asetsena a odzi mu, yɛyɛ edwumayɛfo pa, na yɛnye afofor tsena wɔ asomdwee mu. Ɔmmfa ho nyimpa ban a yɛyɛ, bea a yɛtse anaa ɔhaw ahorow a yehyia no, Bible ngyinadonsɛm botum aboa hɛn ber nyina.​—Kenkan Isaiah 48:17; hwɛ Nsɛm bi a Wɔakyerɛ Mu 3.
IBOTUM ENYA BIBLE NKƆNHYƐ MU AHOTODO
Bible kyerɛwfo Isaiah hyɛɛ nkɔm dɛ wɔbɛsɛɛ Babylon kurow no
13. Ebɛn asɛm na Isaiah kãa dɛ ɔbɔto Babylon kurow no?
13 Bible nkɔnhyɛ ahorow pii aba mu dadaw. Dɛ nhwɛdo no, Isaiah hyɛɛ nkɔm dɛ wɔbɛsɛɛ Babylon kurow no. (Isaiah 13:19) Ɔkyerɛɛ ɔkwan pɔtsee a wobodua do asɛɛ kurow no. Nna esutsen nye aponkɛse na wɔdze agye kurow no ho ban. Naaso, Isaiah hyɛɛ nkɔm dɛ, esutsen no bɔwew na wɔnnkɔtotow aponkɛse no mu. Nsordaafo a wɔrobɔtow ahyɛ kurow no do no bɛfa kurow no a obiara nnye hɔn nnkɔkõ. Isaiah hyɛɛ nkɔm dɛ, ɔbarimba bi a wɔfrɛ no Cyrus na ɔbɛsɛɛ Babylon kurow no.​—Kenkan Isaiah 44:27–45:2; hwɛ Nsɛm bi a Wɔakyerɛ Mu 4.
14, 15. Ebɛn kwan do na Isaiah nkɔnhyɛ no baa mu?
14 Wɔ mfrenhyia 200 ekyir a wɔkyerɛɛw nkɔnhyɛ no too hɔ no, nsordaafo bi baa dɛ, wɔrobɔtow ahyɛ Babylon kurow no do. Nna woana nye hɔn sahen? Dɛ mbrɛ nkɔnhyɛ no kyerɛe no, nna ɔyɛ Persia hen a wɔfrɛ no Cyrus. Nna ber asõ dɛ nkɔnhyɛ no ne fã a ɔaka no ba mu.
15 Wɔ anafua a wɔtowee hyɛɛ kurow no do no, nna Babylonfo no ridzi afahyɛ. Wɔtsee nkã dɛ wɔwɔ ahobambɔ, osiandɛ nna wɔdze esutsen nye aban atsentsen agye kurow no ho ban. Cyrus nye no nsordaafo a nna wɔwɔ kurow no ekyir no tuu bɔnka dze daan esutsen no enyi mbrɛ ɔbɛyɛ a ɔbɔwew. Esutsen no wewee dur beebi a nna Persia nsordaafo no botum etwa. Naaso, nna nsordaafo no bɛyɛ dɛn ahɛn Babylon kurow a n’aban yɛ atsentsen yi mu? Dɛ mbrɛ nkɔnhyɛ no kyerɛe no, wɔanntotow kurow no apon no mu, ntsi nsordaafo no faa kurow no a obiara annye hɔn annkõ.
16. (a) Ebɛn asɛm na Isaiah kãe too hɔ dɛ ewiei koraa no ɔbɔto Babylon? (b) Yesi dɛn hu dɛ Isaiah no nkɔnhyɛ no baa mu ampa?
16 Isaiah hyɛɛ nkɔm dɛ, ewiei koraa no obiara nnkɛtsena Babylon kurow no mu bio. Dza ɔkãe nye dɛ: “Wɔrenntsena mu ara da, eso wɔrenntsena hɔ ofi ebusuasantsen kesi ebusuasantsen.” (Isaiah 13:20) Aso nkɔnhyɛ yi baa mu? Ofi Iraq ahenkurow Baghdad anaafo afamu dze kɔ beebi a nna Babylon kurow no wɔ no yɛ kilomita 80. Hɔ adan amamfõ koraa. Dze besi ndɛ mpo no, obiara nntse hɔ. Jehovah dze “ɔsɛɛ mena” apra Babylon.​—Isaiah 14:22, 23. *
Babylon amamfoyɛ no
17. Ebɛnadze ntsi na yebotum enya ahotodo wɔ Nyankopɔn n’anohoba ahorow nyina mu?
17 Nokwasɛm nye dɛ, Bible nkɔnhyɛ pii aba mu dadaw. Iyi kyerɛ dɛ yebotum enya ahotodo wɔ dza Bible no kã fa daakye ho no mu. Yebotum enya awerɛhyɛmu dɛ, Jehovah bɛma n’anohoba a ɔnye dɛ ɔbɛma asaase adan paradise no aba mu. (Kenkan Nkanee 23:19.) Nokwar mu no, yɛwɔ enyidado “wɔ onnyiewiei nkwa do a Nyankopɔn a onndzi ator dze bɔɔ anohoba tsetseetse no” mu.​—Titus 1:2. *
BIBLE NO BOTUM ASESÃ W’ASETSENA
18. Ebɛn asɛm na Paul kãa faa “Nyankopɔn asɛm” ho?
18 Yeehu dɛ buukuu biara nnyi hɔ a ɔtse dɛ Bible no. No mu nsɛm hyia, na sɛ ɔkã abɔdzenyansahu nye abakɔsɛm ho asɛm a, ɔkã no pɛpɛɛpɛr. Bio so, Bible no ma hɛn afotu a ɔyɛ papa na no mu nkɔnhyɛ pii aba mu dadaw. Naaso, Bible no tum yɛ dza ɔsen iyinom koraa. Ɔsomafo Paul kyerɛɛw dɛ: “Nyankopɔn asɛm wɔ nkwa, ahoɔdzen wɔ mu.” Dɛm asɛm yi kyerɛ dɛn?​—Kenkan Hebrewfo 4:12.
19, 20. (a) Ebɛn kwan do na Bible no botum aboa wo ma aayɛ woho mu nhwehwɛmu? (b) Ibesi dɛn akyerɛ Bible a ɔyɛ akyɛdze no ho enyisɔ?
19 Bible no botum asesã w’asetsena. Obotum aboa wo ma eehu nyimpa ban a eyɛ ankasa. Bible no botum aboa wo ma aatse wo nsusui nye wo nkãtse a no mu dɔ paa no ase. Dɛ nhwɛdo no, ibia yɛbɛkã dɛ yɛdɔ Nyankopɔn. Naaso, sɛ yebotum ada no edzi dɛ yɛdɔ no a, ɔsɛ dɛ yɛdze dza Bible no kã no dzi dwuma.
20 Bible no yɛ nwoma a ofi Nyankopɔn nkyɛn ampa. Ɔpɛ dɛ ekenkan, isũa na ekyerɛ ho enyigye. Kɔ do sũa Bible no fa kyerɛ dɛ w’enyi sɔ akyɛdze yi. Iyi bɛma enya Nyankopɔn no botae a ɔwɔ ma adasamba no ho ntseasee. Yebosũa dɛm botae yi ho adze pii wɔ tsir a odzi hɔ no mu.
^ nky. 6 Nyimpa binom kã dɛ, Bible no mu nsɛm nnhyia, dɛm asɛm yi nnyɛ nokwar. Hwɛ buukuu a wɔato dzin The Bible​—God’s Word or Man’s? a Jehovah Adasefo na wotsintsimii, ne tsir 7 no.
^ nky. 16 Sɛ epɛ Bible nkɔnhyɛ ho nkyerɛkyerɛmu pii a, ibotum akenkan nwomaba a wɔato dzin A Book for All People a Jehovah Adasefo na wotsintsimii, ne nkrataafã 27-29 no.
^ nky. 17 Babylon sɛɛ no yɛ Bible nkɔnhyɛ a enya mbamu no mu kortsee ho nhwɛdo. Ibotum akenkan nkɔnhyɛ ahorow a ɔfa Jesus Christ ho wɔ Nsɛm bi a Wɔakyerɛ Mu 5.
NOKWASƐM 1: BIBLE NO FI NYANKOPƆN NKYƐN
“Kyerɛwsɛm biara fi Nyame ahom mu.”​—2 Timothy 3:16
Ebɛn kwan do na Bible no yɛ soronko fi nwoma fofor biara ho?
Wɔakyerɛ Bible no ase akɔ kasa bɛyɛ 2,800 mu. Woetsintsim Bible no ɔpepepem pii.
Nsɛm a Bible no kã kyerɛ hɛn no yɛ dza yennkotum enya wɔ beebi fofor biara.
1 Thessalonicafo 2:13
Nyankopɔn nye Bible no ne Kyerɛwfo.
Nyankopɔn na ɔkyerɛɛ nyimpa kwan ma wɔkyerɛɛw no nsusui.
NOKWASƐM 2: BIBLE NO YƐ NKƆNHYƐ NWOMA
‘Nyankopɔn nndzi ator.’​—Titus 1:2
Ebɛnadze ntsi na ibotum enya Bible no mu ahotodo?
Bible no hyɛɛ mbrɛ wɔbɛsɛɛ Babylon kurow no ho nkɔm mfe ɔhaha pii ansaana ɔreba mu.
Bible nkɔnhyɛ pii rinya mbamu ndɛ.
Yebotum enya ahotodo wɔ dza Bible no kã fa daakye ho no mu.
NOKWASƐM 3: WƆAKYERƐW BIBLE NO MBRƐ ƆBƐYƐ A IBENYA DO MFASO
“Emi nye Ewuradze wo Nyankopɔn a ɔkyerɛkyerɛ wo ma wo mfaso.”​—Isaiah 48:17
Ebɛnadze na esũa afa Bible no ho?
Dza Bible no kã fa abɔdzenyansahu ho no yɛ nokwar.
Nna Bible akyerɛwfo no yɛ anokwafo.
Jesus ama hɛn afotu a ɔfa mbrɛ yebotum enya enyigye ho, mbrɛ yebotum nye afofor atsena ho, mbrɛ yɛmbɔ mpaa ho nye adwen a ɔsɛ dɛ yenya wɔ sika ho.
NOKWASƐM 4: BIBLE NO BOTUM ASESÃ W’ASETSENA
“Nyankopɔn asɛm wɔ nkwa, ahoɔdzen wɔ mu.”—Hebrewfo 4:12
Ebɛnadze na Nyankopɔn n’Asɛm botum ayɛ ama wo?
Obotum aboa wo ma eenya Nyankopɔn no botae ho ntseasee.
Obotum aboa wo ma eehu nyimpa ban a eyɛ.
Obotum aboa wo ma aatse dza Nyankopɔn hwehwɛ fi wo hɔ no ase.
Nyankopɔn pɛ dɛ ekenkan Bible no, isũa na ekyerɛ ho enyigye.
Sɛ Nyankopɔn nye Bible no kyerɛwfo dze a, ɔnodze ɔnnsɛ dɛ nwoma biara a nyimpa akyerɛw nye no dzi nsɛ da.